“Labadan ganacsade ee Al-Jaabiri iyo Abu-Yaasir waxa ka dhaxeeya xurguf, waana laba nin oo…” | Somaliland.Org
“Labadan ganacsade ee Al-Jaabiri iyo Abu-Yaasir waxa ka dhaxeeya xurguf, waana laba nin oo…”
August 25, 2010	“Labadan ganacsade ee Al-Jaabiri iyo Abu-Yaasir waxa ka dhaxeeya xurguf, waana laba nin oo…”
Hargeysa (Somaliland.Org) Wasiirka Xanaanada Xoolaha iyo degaanka Somaliland Dr. Axmed Xaashi Oday, ayaa sheegay inay xukuumad ahaan go’aansadeen inay u yeedhaan ganacsadaha Xukuumaddii hore dhoofka Xoolaha u xidhay ee Saleebaan Siciid Al-Jaabiri.
Wasiirka oo shalay u waramay qaar ka mid ah warbaahinta, waxa uu ka jawaabay warar saxaafadda qaarkood faafiyeen oo la xidhiidha in ganacsadaha Abu-Yaasir uu shuruudo ku xidhay xoolaha laga dhoofiyo dekedda Berbera ee la geeyo suuqyada Imaaraadka Carabta. “Horta waxaan idiin sheegayaa intaas warkaas aad maqasheen waanu maqalay, laakiin waxa uu sheegay wax weyn oo dhibaato ma laha, waa wax iska caadi ah, xanuuno yar yar oo laga dawayn karo xoolaha ayuu yidhi.
Haddii aad haysaan in Carabkaasi Alla Yaasir uu qoray qoraalkaasi waxaan u malaynayaa inay cid kale jaraa’idka iskaga qortay. Haddiise uu qoray Alla Yaasir waa ninkii dekedda Jabuuti madaxda ka ahaa ee yidhi ‘xoolaha Somaliland ha laga dhoofiyo dekeda Berbera. Haddii markii uu arkay in xoolaheenii ka dhoofayaan dekadeena uu is leeyahay ka carqaladee way dhici kartaa, laakiin nasiib-wanaag waxa meesha ku qorani waa wax fudud, ninkaasina inuu qoray ma hubo,” ayuu yidhi wasiirku.
Waxa uu sheegay in labada ganacsade ee Al-Jaabiri iyo Alla Yaasir uu hirdan ka dhexeeyo, isla markaana ay isku hayaan suuqyada Xoolaha nool ee dibadda loo dhoofiyo. “Horta labadan ganacsade ee Al-Jaabiri iyo Alla-Yaasir waxa ka dhaxeeya xurguf, waana laba nin oo suuqa dhoofka xoolaha isku eryaya. Jaabiri waxa Maxjarka Berbera ku kelifay inuu sameeyo markii ninkaa kale maxjarka Jabuuti ku cuno-qabateeyay.
Xiligan wax kooto ah oo dhoofka xoolaha ka jiraa ma jirto, nin kasta oo ganacsade ahi xooluhu way u furan yihiin oo maxjarkana waa loogu caafimaadinayaa xoolihiisa, waana lagu eegayaa, waanu ka dhoofsan karaa. Sayladaha Xoolahana xiligan caadi ayaa looga iibsadaa oo waxa la ii sheegay inay niman Carbeed intay Saylada tagaan ayay iibsadaan xoolaha,” ayuu yidhi Axmed Xaashi Oday.
Mar la waydiiyay in Al-Jaabiri oo xukuumaddii talada wareejisay dhoofka xoolaha u xidhay uu dalbaday in heshiiskaa loo cusboonaysiiyo, waxa uu ku jawaabay; “Heshiiskii in loo cusboonaysiiyo ma uu codsane, anagaaba u yeedhnay, waayo heshiiskaaba anagu kuma qanacsanin oo waxaanu doonaynaa in heshiiskaasi wax laga bedelo, sida ugu dhakhsaha badana waxaanu go’aan ku gaadhnay in loo yeedho.”
Previous PostMetro engineer appointed to cabinet post in Somaliland in eastern AfricaNext Post“Maxkamadda waa la iiga yeedhay, tegina maayo oo….” Waraysi Xoghayaha UDUB	Blog